နှလုံးသားတွေ လှူဖြစ်ခဲ့ပြီ ……….. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » နှလုံးသားတွေ လှူဖြစ်ခဲ့ပြီ ………..
နှလုံးသားတွေ လှူဖြစ်ခဲ့ပြီ ………..
Posted by နွယ်ပင် on Feb 24, 2012 in Myanma News, News | 14 comments
ကိုမင်းကိုနိုင်မှ ကိုဆောင်းဦးလှိုင်၏ ပုံတူပန်းချီကားအား အမှတ်တရအဖြစ် ပေးအပ်စဉ်
၁၇.၂.၂၀၁၂ (သောကြာနေ့) ည (၇း၀၀) နာရီအချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ အမျိုးသားကဇာတ်ရုံ၌ ကျင်းပခဲ့သော ဆောင်းဦးလှိုင်(တစ်ကိုယ်တော်) ဖျော်ဖြေမှု “နှလုံးသားတွေလှူမယ့်ည” တေးဂီတ ဖျော်ဖြေ ပွဲတွင် ရရှိသမျှ ဝင်ငွေအားလုံး (၁၂၆) သိန်းတိတိအား သုံးပုံခွဲ၍ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၊
၈၈ ကျောင်းသားများအဖွဲ့တို့အား လှူဒါန်းပြုလုပ်မည် ဖြစ်သော်ငြားလည်း ယင်းည ဖျော်ဖြေပွဲ၌ စင်မြင့်ပေါ်သို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ဥက္ကဋ္ဌနှင့်
၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်တို့အား တက်ခွင့် မပြုခြင်း၊ အသင်း၏ ယူနီဖောင်းဖြစ်သော အဖြူအနက် ဝတ်စုံတို့အား လဲလှယ်ခိုင်းခြင်း၊
နာရေးကူညီမှု အသင်း(ရန်ကုန်) မော်တော်ယာဉ်များအား အမျိုးသားကဇာတ်ရုံ ဝင်းအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခွင့် မပြုခြင်း စသည့် အခက်အခဲ အပိတ်အပင်များကြောင့်
စင်မြင့်ထက်ပေါ်တွင် အလှူရှင် ပွဲကြည့်ပရိသတ်များ ရှေ့မှောက်၌ အလှူငွေပေးအပ်မှုကို မပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ချေ။ ထို့ကြောင့် အလှူရှင် ပွဲကြည့်ပရိသတ်များ
အနေဖြင့်လည်း မုဒိတာပွား၍ သာဓု မခေါ်ဆိုနိုင်ခဲ့ချေ။ သို့သော် နှလုံးသားတွေလှူမယ့်ညသည် မထင်မှတ်ဘဲ အောင်မြင်စွာ ပြီးမြောက်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် ၈၈ ကျောင်းသား အဖွဲ့ကိုယ်စား ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မင်းကိုနိုင်အား အလှူငွေ ၄၂၀၀၀၀၀ိ/- (လေးဆယ့် နှစ်သိန်း) ကျပ်တိတိကို ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ပြီး ကိုမင်းကိုနိုင်မှ ကျေးဇူးတင်စကားအား ကြေကွဲစွာဖြင့် ပြောကြားခဲ့ကာ နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်သူထံသို့ ကိုဆောင်းဦးလှိုင်မှ အလှူငွေ ၄၂၀၀၀၀၀ိ/- (လေးဆယ့်နှစ်သိန်း)ကျပ် တိတိအား လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်သူမှ ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြား ခဲ့ပါသည် ..ယင်းနောက် ကိုဆောင်းဦးလှိုင်မှ လှူဒါန်းရန် ကျန်ရှိသော ၄၂၀၀၀၀၀ိ/- (လေးဆယ့်နှစ်သိန်း)ကျပ်တိတိအား အများဆန္ဒဖြင့် မျိုးဆက်သစ်ဂီတဖျော်ဖြေပွဲတစ်ပွဲ ထပ်မံ၍ အလှူဒါန မတည်ငွေအဖြစ် အသုံးပြုရန် ဆုံးဖြတ်မှုကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
မှတ်ချက် ။ မြတ်လေးငုံမှ ဖော်ပြသည် ။
လေးစားပါတယ် ဆရာတို့ ရေ..
ငပြောင်တို့ အဖွဲ့ ကို ဂရုစိုက်မနေပါနဲ့ 
အဆိုတော် ဆောင်းဦးလှိုင်က ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ရက်နေ့ ရန်ကုန်မှာ တကိုယ်တော် စင်မြင့်ဖျော်ဖြေပွဲလုပ်တော့ သူ့ပွဲကို လာမကြည့်ကြဖို့ တချို့သောသူတွေကို သူက ဖုန်းဆက် ဟန့်တားခဲ့ရပါတယ်။
အာဏာပိုင်တို့က ၈၈ မျိုးဆက် ခေါင်းဆောင်များ ဒီပွဲ မတက်စေနဲ့လို့ သူ့ကို ပြောတဲ့အတွက် သူကလည်း အဲဒီလို လိုက်ပြီး ပိတ်ရတာပါ တဲ့။
စတိတ်ရှိုးလာ ပရိသတ်တွေထဲမှာ နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) က ပုဂ္ဂိုလ်များလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ သူတို့ကိုလည်း စတိတ်ရှိုးကြည့်ချင်ကြည့်၊ ယူနီဖောင်းတွေတော့ ၀တ်မလာနဲ့လို့ အမိန့်တော်ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီလို ဖိအားပေးတဲ့ အာဏာပိုင်တွေကို အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေမှာ ဝေဖန်ပြစ်တင်တာတွေ ချက်ချင်း ရောက်ချလာပါတယ်။ ဆောင်းဦးလှိုင်ကတော့ ဘာအပြစ်မှ မပြောချင်တော့ပါဘူးလို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီကို လေ့ကျင့်ဆဲအနေအထား ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် တဲ့။
“လွတ်လပ်ခွင့်၊ လူ့အခွင့်အရေး … ဒါတွေကို နားလည်တဲ့လူတွေ ရှိသလို နားမလည်သေးတဲ့၊ သင်ယူဆဲ ပုံစံ မပြောင်းနိုင်သေးတဲ့ လူတွေလည်း ရှိနေမယ်လေ။ ဒါကတော့ သဘာဝပဲ။ အဲဒီတော့ ကျနော် တို့က နားမလည်သေးတဲ့လူတွေကို နားလည်အောင်ပဲ စည်းရုံးပြီး တဖြည်းဖြည်း သွားရမှာဗျ”
ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ – အဆိုတော်တယောက်ရဲ့ အရည်အချင်းက အဆို “တော်”ဖို့ တခုတည်း မဟုတ်တော့ဘူး လို့။ စိတ်ရှည်ရမယ်၊ သည်းခံရမယ်။ ဟော … အာဏာပါဝါပြသူများကိုလည်း စည်းရုံး နားချတာတွေလည်း လုပ်နေရပါပြီ။
ဘယ်လောက် ကြာအောင် နားချရမှာလဲ။
“နေ့တွင်းညတွင်းချင်းတော့လည်း အားလုံးက ဒီအခွင့်အရေး၊ ဒီစနစ်တွေ၊ ဒီပုံစံတွေ နားလည်သွားမယ်လို့ ပြောလို့ မရဘူးပေါ့ဗျာ၊ ကျနော့တို့ဘက်ကလည်း ဒီအခက်အခဲကို ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့ပဲပေ့ါ၊ ကျနော်တို့ကတောင် ပြန်ပြီး ကိုယ်ချင်းစာနေရတာပေါ့ဗျာ” လို့ ဆောင်းဦးလှိုင်က ပြောပါတယ်။
ဆောင်းဦးလှိုင်က ဒီပွဲမှာ သိန်း တရာကျော် ရခဲ့ပါတယ်။ ဒီငွေတွေ သူ ဘာလုပ်မှာလဲ။
နာရေးအသင်းကို ၄၂ သိန်း၊ ၈၈ မျိုးဆက် ခေါင်းဆောင်များရဲ့ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် ၄၂ သိန်း လှူဒါန်းလိုက်ပြီး ကျန် ၄၂ သိန်းကတော့ နောက်ထပ် ဂီတ ဖျော်ဖြေပွဲများအတွက် မတည်ငွေ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
နာရေးကူညီမှုအသင်းဝင်တဦးလည်းဖြစ်တဲ့ ဆောင်းဦးလှိုင်က အရင်ကလည်း အသင်းရန်ပုံငွေအတွက် စင်ပေါ်တက် သီချင်းဆိုခဲ့ဖူးသူပါ။
အနာဂတ် ရန်ပုံငွေပွဲတွေမှာရော အဟန့်အတားတွေ ကြုံရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
“ဒီလိုပဲ တဖြည်းဖြည်း နဲ့ နားလည်လာအောင် လုပ်ရမှာပေ့ါ” လို့ ဆောင်းဦးလှိုင်က ပြောပါတယ်။
စည်းကမ်းရှိတဲ့ ဒီမိုကရေစီ အကောင်အထည် မပေါ်သေးခင်တော့ စိတ်ရှည်သည်းခံရခြင်းဟာလည်း အဆိုတော်တယောက်ရဲ့ အရည်အချင်း ဖြစ်လာပြီ ထင်ပါရဲ့။
တိုင်းပြည်အတွက်သာလုပ် မင်းတို့နောက်မှ လိုက်မဲ့ ကျွန်တော်တို့(တိုင်းသူပြည်သား)တွေရှိတယ်။
လက်ယားနေပြီ အမှန်ခြစ်လေး ပေးချင်လွန်းလို့။
ကြားရတာ မင်္ဂလာရှိစရာပါပဲ … ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး … ပိုက်ဆံရှာ လူဒါန်းတာ … တခြားအနုပညာရှင်တွေပါ .. နမူနာယူသင့်တယ် …. ။အဆိုတော် ဆောင်းဦးလှိုင်လို လူတွေများလာလျှင် … ပရဟိတ္တလုပ်ပြီး သူများအကျိုးသယ်ပိုးတဲ့ အသင်းတွေအတွက် အလှူငွေများများ ပိုရနိုင်ပြီး .. လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုလည်း ဖြည့်နိုင်တော့မယ် …. ။ အလွန်ကောင်းတဲ့ လုပ်ရပ်ပါပဲ … ။
အလွန်မွန်မြတ်သန့် ရှင်းသည့် ကုသိုလ် ပါ တကား။
တကယ်ကောင်းတဲ့ အလှူလေးပါ… အနုပညာရှင်တွေက အဲလိုလေးတွေလုပ်ပေးတော့ ပိုအားရှိတာပေါ့.. လူလဲပိုသိတော့ လူချင်သူတွေလဲ နည်းလမ်းရတာပေါ့ဗျာ………..
ကဲကျွန်တော်တို.လဲ နောက်ထပ် အလှူအတွက် ၀ိုင်းဝန်း ကြိုးစားကြအုံးစို.ဗျားးးးးးးးးးး
မြန်မာပြည်က လူငယ် တွေ အတွက် ဒီလို Role Model တွေ များများ လိုနေပါတယ်။
ဆောင်းဦးလှိုင် ရေ လေးစားပါတယ်။ ဆက်ပြီး လုပ်ဖို့ကိုလဲ အားပေးပါတယ်။
ဒီအလှူ အတွက် သာဓု လဲခေါ်ပါတယ်။
အော် သူများတွေ လှူနေတန်းနေကြတာကို လိုက်ဖျက်တဲ့ လူ့ ငနွားအလိုတော်ရိ
ကြောက်ပိတ် ပိတ်နေတာနဲ.တူတယ် ၊အခုထိလည်း လမ်းတွေ ဒုတ်တားပြီးပိတ်နေတုန်းပဲ …။
သာဓုခေါ်ပါတယ် ကိုဆောင်းဦးလှိုင် ၊
Ko Saung Oo Hlaing………I fully respect you.